Battle for Wesnoth 1.16 dia tonga miaraka amin'ny fanatsarana ny fampielezan-kevitra sy ny maro hafa | Ubunlog
Tonga ny ady ho an'ny Wesnoth 1.16 miaraka amin'ny fanatsarana ny fampielezan-kevitra sy ny maro hafa
Telo taona taorian'ny famoahana farany signitifying, vao haingana nambara ny famoahana ny dikan-teny vaovao Battle for Wesnoth 1.16, izay lalao tetikady fantasy multiplatform mifototra amin'ny fihodinana izay manohana ny fampielezan-kevitry ny mpilalao tokana sy ny maro an'isa amin'ny Internet na amin'ny solosaina tokana.
Ny ady ho an'i Wesnoth dia iray amin'ireo lalao paikady open source malaza indrindra izay azonao lalaovina izao. Tsy vitan'ny hoe nivoatra hatry ny ela io lalao io, fa manana lalao kintana, mekanika tsy manam-paharoa maro, ary fifaliana fotsiny ny mijery ny fomba filalaovanao azy.
Raha efa nilalao Dungeons sy Dragons ianao dia ho fantatraoamin'ny karazana faritany izay The Battle for Wesnoth. Mahagaga fa sarotra ary tsy lalao fantasy azonao idirana avy hatrany, fa ny Battle for Wesnoth dia manana zava-tsoa miafina lalina ao anatiny.
Ity faritra ity dia misy faritra 3, Anisan’izany ny tany avaratra, ny faritry ny Elves any Atsimo Andrefana, ary ny fanjakan’i Westnoth. Ny faritra sasany toa an'ilay fanjakana dia sivilizasiona kokoa, fa ny hafa toa ny avaratra, ohatra, dia feno orcs, barbariana, ary dwarf.
1 Momba ny ady ho an'i Wesnoth
2 Inona no vaovao ao amin'ny Battle for Wesnoth 1.16?
3 Ahoana ny fametrahana Battle for Wesnoth amin'ny Linux?
Momba ny ady ho an'i Wesnoth
Ny ady ho an'i Wesnoth dia lalao paikady mifototra amin'ny lohahevitry ny nofinofy izay ny andraikitrao dia ny mamorona tafika lehibe hamerenana indray ny seza fiandrianan'i Wesnoth.
Voalohany aloha, ny isan'ny andraikitra azonao atao dia manome ny lalao fiovaovana be dia be. Ny fahazoana indray ny seza fiandrianana dia tsy inona fa scenario - azonao atao ihany koa ny miambina toby iray, mandray miaramila tsy maty manota, ary mitarika ny elves hamorona trano vaovao ao amin'ny fanjakana.
Misy vondrona mihoatra ny 200 hifehy miaraka amin'ny foko 16 samihafa sy ankolafy enina lehibe. Ary raha tsy ampy izany, dia azonao atao mihitsy aza ny mamorona sari-tany, scenario, ary karazana tarika.
Ity fahaizana mamorona ny fomba filalaovanao ity dia tena mahavariana ho an'ny RPG open source. Ny ady ho an'i Wesnoth dia lalao tetika be ihany koa, mitaky anao hamindra vondrona handresena ny fahavalonao, izay mitaky asa miaraka amin'ny vondrona maromaro mihetsika miaraka.
Raha resaka lalao RPG fantasy open source, ny ady ho an'i Wesnoth dia ezaka tena tsara. Na izany aza, ny fampisehoana dia ahitana fanentanana mihoatra ny ampy mba hitazonana ny fahaliananao, samy manana ny tantarany avy.
Amin'ny maha-vao manomboka anao dia afaka manomboka amin'ny zavatra fohy ianao, angamba any amin'ny toerana tsy mila ahitanao olona iray fotsiny, angamba miady amin'ny ady kely; fanentanana sarotra kokoa dia afaka manome anao andraikitra hiaro ny tanindrazanao amin'ny tafika mpiaro; ary ny lava indrindra dia hitarika anao amin'ny scenario 20 na mihoatra, handrakotra ny lafiny rehetra amin'ny lalao sy hizaha toetra tsara ny fahaiza-manao stratejika.
Raha tsy ampy izany dia be dia be ny fanentanana noforonin'ny mpampiasa azonao alaina sy andramana, na azonao atao ny miara-miasa amin'ny mpamoaka sari-tany sy ny fiteny fandaharana ary mamorona toe-javatra vaovao ho anao manokana. Ary mazava ho azy fa misy foana ny safidy Multiplayer, ahafahanao mihantsy namana hatramin'ny 8 ho an'ny fahambonian'ny ady.
Inona no vaovao ao amin'ny Battle for Wesnoth 1.16?
Nihatsara ny dikan-teny vaovao ny fampielezan-kevitry ny lalao, dia nanampy fanentanana Multiplayer vaovao (Isle of Mists and World Conquest), dia nampiditrana vondrona lalao vaovao, nanatsara ny sarin'ireo singa efa misy, navaozina tanteraka ary nampifandanja ny antoko Dunefolk. API miitatra ho an'ny mpamorona plugin.
Fanampin'izany, nomena ny fitokana-monina fanampiny, izay mizara ho dingana samihafa ankehitriny rehefa manomboka ny lalao, ary nampiana ihany koa ny fahafahana mametraka fandrarana amin'ny anaran'ny mpandray anjara, fa tsy amin'ny adiresy IP ihany.
Nohavaozina ihany koa ny motera faharanitan-tsaina artifisialy, ohatra, nohatsaraina ny fihetsika mifandraika amin'ny fialana sy ny fanasitranana.
Ahoana ny fametrahana Battle for Wesnoth amin'ny Linux?
Mba hametrahana ity lalao tena tsara ity amin'ny fizarana Linux amin'izao fotoana izao, fotsiny tsy maintsy manana fanohanana an'i Flatpak isika.
Ary tsy maintsy manatanteraka an'ity baiko manaraka ity amin'ny terminal izy ireo hametrahana ny lalao.
Tsara ihany koa ny manamarika fa ny lalao dia ao amin'ny katalaogin'ny Steam, ka raha manana ny fampiharana ianao dia afaka mahazo ity lalao ity avy any. Na azonao atao ny misafidy ny hampiditra azy ao amin'ny tranombokinao avy amin'ny rohy etsy ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » Tonga ny ady ho an'ny Wesnoth 1.16 miaraka amin'ny fanatsarana ny fampielezan-kevitra sy ny maro hafa
Ny NVIDIA 495.44 dia tonga miaraka amin'ny fanatsarana fanohanana ho an'ny andiany RTX 30xx sy ny maro hafa
Na dia tonga iray andro taty aoriana aza dia tonga tsara ny Linux 5.15-rc7